Kindle Oasis VS Kindle Voyage သည်စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံး eReaders နှစ်ခုဖြစ်သည် eReaders အားလုံး
Villamandos | | Amazon Kindle, စာဖတ်သူများ
မနေ့ကအမေဇုံသစ်ကိုတရားဝင်တင်ဆက်လိုက်သည် Kindle Oasis ၏ e-reader ...အိုအေစစ် Kindle»/]၊ ၎င်း၏တိုးတက်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းအတွက်ထူးခြားထင်ရှားသောအဆင့်မြင့် eReader အသစ်၎င်း၏ယခင်လေးစားမှုနှင့်အတူ Kindle Voyage အွန်လိုင်းစာဖတ်သူ ...Kindle ရေကြောင်း» /] ပြီးတော့ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်ဒါရိုက်တာကုမ္ပဏီ၏အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်သည့်ယခင် Kindle ၏ကမ်းလှမ်းချက်များကိုနဂိုအတိုင်းထားရှိရန်။ မနေ့ကဆန်းစစ်ပြီးနောက်၊ အမေဇုံစပိန်မှဖိတ်ကြားသောအဖြစ်အပျက်တွင်မိနစ်အနည်းငယ်စမ်းသပ်နိုင်ပြီးနောက်၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို၎င်း၏ယခင်နှင့်ရင်ဆိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွှတ်။ မရပါ Kindle Paperwhite -...Kindle Paperwhite » /] ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကတော့သူ့ညီလေးပါ။
ဒီနေ့နှင့်ဤဆောင်းပါးမှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် Kindle Voyage နှင့် Kindle Oasis အသစ်ကိုအသေးစိတ်အသေးစိတ်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာပါမည်ကျနော်တို့ Kindle Paperwhite အကြောင်းကိုပြောခဲ့သကဲ့သို့မေ့လျော့ခြင်းမရှိဘဲ။ ကွဲပြားခြားနားမှုများများစားစားရှိကောင်းရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အရေးကြီးသည်။ ပထမတစ်ချက်မှာနောက်ခံနှင့်ဆင်တူသောကိရိယာသုံးမျိုးရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်ဒီဇိုင်းနှင့် စတင်၍ သူတို့၏စျေးနှုန်းနှင့်အဆုံးသတ်သွားသည်။
Kindle Oasis အသစ်၊ Kindle Voyage နှင့် Kindle Paperwhite တို့ဘယ်လိုဆင်တူတယ်ဆိုတာကိုသင်သိချင်ရင်ဒီစာမူကနေသင်သာမကသင်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောအခြားအရာများစွာကိုပါရှာဖွေတွေ့ရှိသွားမှာပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဥပမာအားဖြင့် eReader အသစ်တစ်ခုကိုဝယ်ယူရန်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းလောကသို့ ၀ င်ရောက်ရန်သို့မဟုတ်သင်ရှိသည့်စက်ကိုပြောင်းလဲရန်စဉ်းစားနေပါက။
ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်များရှိ၎င်း၏မျက်နှာပြင်၊ စျေးနှုန်းနှင့်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်မိမိကိုယ်ကိုနေရာချထား။ Kindle တစ်ခုချင်းစီမှကျွန်ုပ်တို့အားဘာကမ်းလှမ်းသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိနိုင်ရန်၎င်း၏အဓိကစရိုက်လက္ခဏာနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
1 Kindle Voyage Features နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
2 Kindle Oasis ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
3 Kindle Paperwhite ထူးခြားချက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
4 ဒီဇိုင်း၊ တိုးတက်အောင်စောင့်ရှောက်ရန်နောက်ကျောတ ဦး ခြေလှမ်း
5 ဖန်သားပြင်; ကွဲပြားမှုမရှိသောကြောင့်သူတို့ကိုမရှာပါနှင့်
6 အသစ်တစ်ခုအဖြစ်လိုအပ်သောနှင့်လုံလောက်သောအသစ် Kindle အိုအေစစ်ကိစ္စတွင်?
7 စျေးနှုန်း; ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်
8 Kidle Oasis သည်ငြင်းခုံမှုများစွာမပါဘဲဤပြိုင်ပွဲတွင်အနိုင်ရခဲ့သည်
Kindle Voyage Features နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
မျက်နှာပြင် - ၆ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိအက္ခရာ e-papper နည်းပညာနှင့်ထိတွေ့မှု၊ ထိတွေ့မှု၊ resolution မှာ6x 1440 နှင့်တစ်လက်မလျှင် ၃၀၀ pixels ဖြစ်သည်။
အလေးချိန် - WiFi ဗားရှင်း ၁၈၀ ဂရမ်နှင့် ၁၈၈ ဂရမ် WiFi + 180G ဗားရှင်း
Internal memory -4GB ကျော်သင်သိမ်းထားနိုင်သည့် eBooks 2.000 ကျော်သည်စာအုပ်များ၏အရွယ်အစားပေါ်မူတည်သည်။
ဆက်သွယ်မှု - WiFi နှင့် 3G ဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ် WiFi တစ်ခုတည်းသာ
ထောက်ပံ့ထားသောပုံစံများ - Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, အကာအကွယ်မဲ့ MOBI နှင့် PRC တို့ကိုမူရင်းပုံစံဖြင့်; ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP
Kindle Voyage အွန်လိုင်းစာဖတ်သူ ...
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော 300 dpi resolution မြင့်မားသော display: စက္ကူကဲ့သို့တောက်ပနေသည့်အလင်းရောင်မရှိသည့်အချိန်၌ပင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
Page Turn feature သည်သင်၏လက်ချောင်းကိုမယူဘဲစာမျက်နှာများကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သင်လိုချင်သလောက်ဖတ်ပါ။ အားသွင်းခြင်းတစ်ခုတည်းတွင်ဘက်ထရီသည်နာရီနှင့်ချီ။ ကြာသည်။
ကျယ်ပြန့်သောဈေးနှုန်းချိုသာသော eBook များစာရင်း - စပိန်ဘာသာဖြင့် ၁၀၀၀၀၀ ကျော်၊ စျေးနှုန်းမှာ ၄.၉၉ ဒေါ်လာအောက်သာရှိသည်။
Kindle Oasis ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Display: ၆ လက်မ touchscreen ပါဝင်ပြီး E Ink Carta ™နှင့်ပေါင်းစပ်စာဖတ်ခြင်းအလင်း၊ ၃၀၀ dpi၊ အကောင်းဆုံး font ဖောင့်နှင့်မီးခိုးရောင်အကြေး ၁၆ ခုပါဝင်သည့် Paperwhite နည်းပညာပါရှိသည်။
အရွယ်အစား - ၁၄၃ x ၁၂၂ x ၃.၄-၈.၅ မီလီမီတာ
အလေးချိန် - WiFi ဗားရှင်း ၁၃၁/၁၂၈ ဂရမ်နှင့် ၁၁၃၃/၂၄၀ ဂရမ် WiFi + 131G ဗားရှင်း (အလေးချိန်ကိုအဖုံးမပါဘဲပထမနှင့်ဒုတိယတွဲထားပါ)
ထောက်ပံ့ထားသောပုံစံများ - Format 8 Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, အကာအကွယ်မဲ့ MOBI၊ PRC၊ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP
Kindle Paperwhite ထူးခြားချက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Display: ၆ လက်မအရွယ်မျက်နှာပြင်နှင့် Letter e-paper နည်းပညာပါ ၀ င်ပြီးစာဖတ်နိုင်သည့်အလင်းရောင်၊ ၃၀၀ dpi၊ အကောင်းဆုံးနည်းပညာနှင့်မီးခိုးရောင်အကြေး ၁၆ ခုပါရှိသည်။
အလေးချိန် - WiFi ဗားရှင်း ၁၈၀ ဂရမ်နှင့် ၁၈၈ ဂရမ် WiFi + 205G ဗားရှင်း
ဘက်ထရီ - အမေဇုံကပစ္စည်းတစ်ခုအားသွင်းရုံဖြင့်စာဖတ်ခြင်းကို ၆ ပတ်ကြာပျော်ရွှင်စွာပြုလုပ်နိုင်ရန်အာမခံသည်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသည့် Built-in အလင်းသည်နေ့ရောညပါဖတ်သည်။
အီးမေးလ်သတိပေးချက်များ (သို့) သတိပေးချက်များမပါဘဲစာဖတ်လိုစိတ်ကိုနှစ်သက်ပါ။
ဒီဇိုင်း၊ တိုးတက်အောင်စောင့်ရှောက်ရန်နောက်ကျောတ ဦး ခြေလှမ်း
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် Kindle Voyage ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူအမေဇုံသည်စွမ်းအားကြီးမားပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ အရည်အသွေးမြင့်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းကိုသင်၏လက်၌ကိုင်ထားရုံဖြင့်သင်သည်မည်သည့်ကိရိယာ၏ရှေ့မှောက်၌မရှိသည်ကိုသိနိုင်သည်။
သို့သော် Kindle Oasis ကိုစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာချိန်တွင် Jeff Bezos မှညွှန်ကြားသည့်ကုမ္ပဏီသည်အခြားလမ်းကြောင်းသို့ပြောင်းရန်ခြေလှမ်းနောက်ကိုလှမ်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့အဘို့အရာ။ ယခု Kindle အသစ်တွင်အရည်အသွေးနိမ့်သည့်ပလပ်စတစ်သည်အဓိကကျသောဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်သေးငယ်သောအရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်အလွန်နည်းသောကိရိယာကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် Kindle အသစ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောပလတ်စတစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားမကောင်းသောခံစားချက်မရှိစေပြီးအလေးချိန်လျှော့ချခြင်းကိုများစွာတန်ဖိုးထားသည်။ Kindle Voyage အလေးချိန်မှာ ၁၈၈ ဂရမ်မှ New Kindle Oasis အလေးချိန်မှာ ၁၃၁ ဂရမ်သာရှိသည်။
အဖုံး၏ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည့်ဘက်ထရီသည် Kindle Voyage တွင်အသုံးပြုသောအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းမရှိသော်လည်း Kindle Oasis ၏အားသာချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားအရာများစွာကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊
ဒီဇိုင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည် Kindle Paperwhite သည် Kindle Oasis နှင့် Kindle Voyage တို့၏နောက်ကွယ်တွင်တစ်လှမ်းသာကျန်သည်ကံကောင်းတာကစာဖတ်သူအများစုကဒီပစ္စည်းရဲ့အပြင်ဘက်ဒီဇိုင်းကိုဂရုမစိုက်ကြဘူး။ တကယ်အရေးကြီးတာက ၄ င်းဟာသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုပေးစွမ်းသည်။
အကယ်၍ Kindle သုံးခုကိုစားပွဲပေါ်တင်ပြီးဖွင့်မယ်ဆိုရင်၎င်းရဲ့ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာဆင်တူမှုများစွာနဲ့အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုတွေတွေ့နိုင်တယ်။ ထို့အပြင် Kindle Oasis, Kindle Voyage နှင့် Kindle Paperwhite တို့၏အရွယ်အစားများသည်အရွယ်အစားတူညီပြီးနည်းပညာတစ်ခုတည်းကိုအသုံးပြုထားပြီးတစ်လက်မလျှင် pixel resolution အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရမည့်ကွဲပြားခြားနားမှုအနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် luminosity နှင့် Kindle Oasis သည်အလင်းရောင်နည်းသည့်အခြေအနေများတွင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုမိုတောက်ပသောအလင်းကိုပေးသည့်စျေးကွက်တွင်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကွဲပြားခြားနားမှုရှုထောင့်သည်ကိရိယာသုံးမျိုးသည်အလင်းကိုပေါင်းစည်းထားသည့်အတွက်အမှားအယွင်းများနှင့်ခက်ခဲသောအခြေအနေများနှင့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိကိုမချန်မထားဘဲအလင်းကိုပေါင်းစပ်ထားကြောင်းသိရှိခြင်းသည်၎င်း၏အရေးပါမှုကိုအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးစေသည်။
သေချာသည်မှာ၊ မျက်နှာပြင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ယူရန်စိတ်ရှုပ်စေသောကွဲပြားခြားနားမှုများထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသုံးခုစလုံးသည်အလွန်ဆင်တူပြီးအလွန်သေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အလွန်ကွာခြားမှုမရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
အသစ်တစ်ခုအဖြစ်လိုအပ်သောနှင့်လုံလောက်သောအသစ် Kindle အိုအေစစ်ကိစ္စတွင်?
ရက်ပေါင်းများစွာကဖြစ်နိုင်ခြေကောလာဟလခဲ့သည် Kindle အသစ်တွင်ပြင်ပဘက်ထရီသည်အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ဤအမှုသည် Kindloe Voyage နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့် Amazon တံဆိပ်ပါသော eReader နှင့် ပတ်သတ်၍ Kindle Oasis အသစ်၏ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။
သုံးစွဲသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်စစ်မှန်သောကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သုံးစွဲသူများနည်းပါးသောကြောင့်၎င်းကိုအသုံးချလိမ့်မည်ဟုအလွန်ကြောက်ပြီး eReader ဘက်ထရီသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကြီးမားသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားပြီး၎င်းသည်၎င်းအတွက်မလိုအပ်ကြောင်းယုံကြည်သည်။ အသစ် Kindle မဟုတ်သလို၎င်း၏ယခင်မှလေးစားမှုနှင့်အတူအကြီးအကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်ဖို့အဖြစ်အလုံအလောက်။
ဒါ့အပြင်ဒီ Kindle အသစ်ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်အားသွင်းပေးတာကြောင့်ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ မည်သူမဆို eReader တွင်ထည့်သွင်းထားသည့်ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့်အရာတစ်ခုကိုတကယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါသလား။.
El Kindle ရေကြောင်း စျေးကွက်ထဲတွင်တစ် ဦး ထက်ပိုသောအံ့အားသင့်ဖွယ်စျေးနှုန်းများဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ပုံမှန်ဈေးနှုန်းထက်နည်းသော၊ စျေးနှုန်းချိုသာပြီးမည်သည့်သုံးစွဲသူမဆိုလက်လှမ်းမီနိုင်သော eReaders များရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမေဇုံကကျွန်ုပ်တို့သည် Premium ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအဆင့်မြင့်အီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရပြီး၎င်းသည်အခြားအမျိုးအစားတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့မရနိုင်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများကိုပေးနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အခုအချိန်မှာ ဒီပစ္စည်းကိုယူရို ၁၈၉.၉၉ နဲ့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်.
ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်မှဒါရိုက်တာကုမ္ပဏီကမူ၎င်း၏စာရင်းထဲတွင် Basic Kindle နှင့် Kindle Paperwhite နှစ်မျိုးလုံးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းကိုယူရို ၇၉.၉၉ နှင့်ယူရို ၁၂၉.၉၉ အသီးသီးဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သည်။
Kindle Voyage ကိုစတင်ရောင်းချခြင်းသည်အွန်လိုင်းစတိုးကြီးများအတွက်ဆိုးဝါးစွာမသွားခဲ့ပါ။ အစုရှယ်ယာပြproblemsနာများရှိသော်လည်းရောင်းအားသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်ခဲ့သည်။ The အိုအေစစ် Kindle ဆိုလိုတာက Kindle Voyage ထက်စျေးနှုန်းကပိုပြီးမြင့်မားနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့သလိုပါပဲ၊ ကျွန်တော်တို့မှာအသစ်အဆန်းတွေအများကြီးမပေးပါဘူး။ လောလောဆယ်ဒီကိရိယာ စျေးကွက်ထဲတွင် ၂၈၉.၉၉ ယူရိုဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်သုံးစွဲရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပင်စဉ်းစားခြင်းမရှိသောသုံးစွဲသူအမြောက်အများအတွက်အလွန်အမင်းတားမြစ်ထားသောစျေးနှုန်းမှာဒစ်ဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ရန်အတွက်သာအီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်ပေါ်တွင်ငွေပမာဏဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန်သုံးခုအကြားစျေးနှုန်းကွာခြားချက်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ယနေ့ eReader တွင်ယူရို ၃၀၀ နီးပါးရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသောသုံးစွဲသူများစွာကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒီဇိုင်းနှင့်အာရုံခံအင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါသည့် Kindle ရှိမည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေနည်းနည်းသုံးစွဲလိုလျှင် Kindle Paperwhite သည် ၁၂၉.၉၉ ယူရိုအတွက်တန်ဖိုးရှိ Kindle သည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းကိုခံစားရန်ခွင့်ပြုမည့်အလွန်ကောင်းသော Kindle ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် eReader ၏ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်အတူအဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ဒီဇိုင်းကိုအလယ်တန်းကြောင်းပြောနိုင်ပါတယ်။
Kidle Oasis သည်ငြင်းခုံမှုများစွာမပါဘဲဤပြိုင်ပွဲတွင်အနိုင်ရခဲ့သည်
အမှန်မှာ Amazon အနေဖြင့် Kindle Oasis အားအလေးချိန်နိမ့်ပြီးဒီဇိုင်းပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်အပိုပစ္စည်းတစ်ခုပါ ၀ င်သည့်အပြင်ဘက်ထရီထပ်မံထပ်မံပေးသည်။ သို့သော်ထိုနေရာသည်သတင်းရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ အကယ်၍ Kindle Voyage သည်ကိရိယာ၏ဗားရှင်း ၁.၀ ဖြစ်ခဲ့လျှင်ဤ Kindle Oasis သည် ၁.၂ ပြproblemsနာမရှိဘဲစဉ်းစားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အရေးကြီးသောသတင်းများပါ ၀ င်သော 1.0 ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။
Kindle Oasis အသစ်သည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာများပြားလွန်းသော်လည်းဤပြိုင်ပွဲသုံးခုကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည် Kindle Voyage နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ယူရို ၁၀၀ ထက်မပိုသောဈေးနှုန်းဖြင့်မည်သည့်အရာမျှတိုး။ တိုးတက်လာခြင်းမရှိ။ ငါတို့အားလုံး Kindle အသစ်ထံမှများစွာမျှော်လင့်ထားကြပြီး၎င်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့်အရာတစ်ခုသာမကဘဲစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များပါ ၀ င်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ဤကိစ္စသည်ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုသောစမတ်ဖုန်းတွင်အလွန်အသုံးဝင်သည်၊ သို့သော်ဘက်ထရီသည်ရက်သတ္တပတ်များစွာကြာရှည်နိုင်သည့် eReader တွင်ယုတ္တိဗေဒနှင့်အသုံးဝင်မှုကိုကျွန်ုပ်မရိပ်မိပါ။
တင်းကျပ်စွာပြိုင်ပွဲတွင်အနိုင်ရသူသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း Kindle Oasis ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းကိုကြည့်ပြီးအထူးသဖြင့် eReader တွင်လိုချင်သည့်အရာကိုကြည့်မည်ဆိုလျှင်အနိုင်ရသူသည် Kindle Paperwhite, မျှမျှတတ Kindle ဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းစွာအံ့မခန်းစျေးနှုန်းနှင့်အတူသမိုင်း၌တည်၏။
သင်တို့အတွက် Kindle Oasis အသစ်၊ Kindle Voyage နှင့် Kindle Paperwhite တို့၏ပြိုင်ပွဲတွင်မည်သူနိုင်သနည်း။။ ဤထင်မြင်ချက်ကိုဤဖိုရမ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ဖိုရမ်သို့မဟုတ်လူမှုကွန်ယက်များမှမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသင်နှင့်သင်၏ဆွေးနွေးချက်ကိုဆွေးနွေးရန်အဆင်သင့်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » Kindle Oasis VS Kindle Voyage သည်စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံး eReaders နှစ်ခုဖြစ်သည်
ကောင်းပြီ၊ ငါစိတ်ပျက်သွားတယ်၊ အဆုံးကိုရိုးရိုးလေးသာယာတဲ့အပြောင်းအလဲအဖြစ်ဘာသာပြန်ဆိုဖို့စောင့်နေတယ်၊ ​​ငါ့ထင်မြင်ချက်အရတော့ခရီးဟာဆွဲဆောင်မှုသိပ်မရှိဘူး။
ပရိုဆက်ဆာအသစ်မရှိ၊ အဆင့်မြှင့်ထားသောမျက်နှာပြင်၊ အရောင်မှင်မစသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေတ်ကာလအလယ်အလတ်ကာလ၌ရှိသေးသည်၊ မည်သည့်ကုမ္ပဏီမှ Renaissance and Modernity ဆီသို့ခြေလှမ်းလှမ်းမည်နည်း။
နာမည်ကျော် imx7 ပရိုဆက်ဆာသည်မည်သည့်နေရာတွင်ဝှက်ထားသနည်း၊ အရောင်ပါသည့်မျက်နှာပြင်၊ ၎င်းတို့အားပိတ်ထားလျှင်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဖြင့်အားသွင်းထားသည့်နေရာ၊
ကျွန်တော်အိုအေစစ်ကိုစမ်းကြည့်ချင်ပါတယ် လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ကိုင်ရတာအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Amazon ရဲ့ပစ္စည်းဒီဇိုင်းအတွက်ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များကိုနှိပ်ခြင်းသည်မည်မျှအဆင်ပြေမည်ကိုကျွန်ုပ်သံသယရှိသည်။ လွယ်ကူသည်။ သို့သော်မည်သူမျှအဟောင်း Papyre 5.1 ရှိခဲ့သည့်ဘီးငယ်လေးကိုအဘယ်ကြောင့်အတုခမပြုသည်ကိုငါအမြဲတမ်းတွေးမိလိမ့်မည်။ ကိရိယာကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ထားသည့်စာမျက်နှာကိုဖွင့်ရန် ပို၍ အဆင်ပြေသောအရာများကိုကျွန်ုပ်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးပါ။
စျေးနှုန်းကငါ့ကိုချွတ်ချော်စေသောအရာဖြစ်တယ်။ အရမ်းစျေးကြီးတယ် ငါဖုံးလွှမ်းအပါအဝင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခု (တွေအများကြီး) ရှိတယ်ထင်ပါတယ်။ မေးခွန်းမှာအဘယ်ကြောင့်၎င်းကိုအပိုပါ ၀ င်သည်ဖြစ်စေသီးခြားစီကမ်းလှမ်းမည့်အစား၊ ၎င်းတို့အားအဘယ်ကြောင့်ထည့်သွင်းရသနည်း၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီပစ္စည်းကိုရုပ်ဆိုးအောင်လုပ်တဲ့အခါ (များသောအားဖြင့်အရမ်းကိုကြော့ရှင်းတဲ့) ကိစ္စမျိုးကိုငါမသုံးတတ်ဘူး။ သူတို့ကအလေးချိန်အများကြီးတိုးလာတယ်၊ ဒါကြောင့် Amazon ဘာကြောင့်ထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလဲဆိုတာကိုဒီမှာငါနားမလည်ဘူး။ သူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေရှိလိမ့်မယ်။
ဒါဟာအဖုံးပိုပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကမ်းလှမ်းသည်အလွန်ကောင်းပေမယ့်ငါသူတို့ကိုယ်ပိုင် kindle နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကနေလွတ်လပ်သောလုပ်သောနေ့၌ပေါ်ပေါက်လိမ့်မည်ဟုထင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူများစားသုံးသောနည်းနည်းလေးနှင့်အတူကျွန်တော်သည်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟုထင်သည်။ ငါသူတို့မပွုပါလျှင်, ဒါကြောင့်အချို့ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်အလေးချိန်သို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်ပြproblemနာကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုထင်ပါတယ်။ မသိဘူး
ဆောင်းပါး၌ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းကွာခြားချက်များမှာ - ပစ္စည်း၏ပိုမိုပေါ့ပါးခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခြင်း (အဖုံးနှင့်အတူ)၊ အဖုံးပါ ၀ င်ခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလင်းရောင်တို့ဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းကွာခြားမှုကိုတရားမျှတရန်လုံလောက်ပါသလား။ အဲဒါမေးခွန်းပဲ။
ယခုအချိန်တွင်ငါသည်ငါ့ "အဟောင်း" KP2 နှင့်အတူနေတုန်းပဲ။
Kindle Oasis ၏ပြwithနာမှာအမှု၏ဘက်ထရီမရှိဘဲ Kindle ၏အနိမ့်အမြင့်သည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကျော်လွန်နေပုံရသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Amazon ကဒီ e-Readers တစ်ခုရဲ့ပိုင်ရှင်အများစုဟာကိစ္စတစ်ခုနဲ့အတူအမြဲသယ်ဆောင်တာဆိုတဲ့အချက်ကိုအားကိုးလို့ပဲ။
ကောင်းပြီ၊ သူတို့နှစ် ဦး ကြားကခရီးသာဖြစ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအိုအေစစ်မှာတိုးတက်မှုမရှိဘူး။ သို့သော် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အနိုင်ရသူကိုရွေးရလျှင် kobo h2o သည်ဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အကောင်းဆုံးစာဖတ်ခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ Firmware များနှင့်စာဖတ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်မြေပြိုခြင်းအားဖြင့်အနိုင်ရရှိသည်။ အချို့သော dpi နည်းပေမယ့် အကယ်၍ ၎င်းသည် DPis ၏မေးခွန်းနှင့် ၆ တွင်နေမည်ဆိုပါကရှင်းလင်းသောအနိုင်ရသူသည်စျေးနှုန်းအရည်အသွေးအတွက်ဆွေးနွေးခြင်းမရှိပဲ kobo hd ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တွင် Kindle 7th နှင့် Kobo Glo HD များရှိပြီး Glo သည် 300 dpi ရှိသည့် Kindle PaperWhite နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်နိမ့်ကျသည်ဟုဆိုခြင်းအတွက်ဝမ်းနည်းပါသည်။
မည်သည့်ထင်ရှားသောဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုမပေးဘဲစျေးကြီးလွန်းသည်။ ဒါဟာ "တူညီတဲ့ပို" ပေမယ့်ပိုစျေးကြီးသည်။ တစ် ဦး ကစုစုပေါင်းစိတ်ပျက်မိကြောင်း။ တိုးတက်မှုများသည်ဖန်သားပြင်၏အရည်အသွေးနှင့်အတူလက်ချင်းကပ်ရမည်။ အဖြူရောင်နောက်ခံနှင့်လုံးလုံးလျားလျားခြားနားသည့်အနက်ရောင်အက္ခရာများပြtheနာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းကဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကတိက ၀ တ်မရှိကြောင်းဖော်ပြနေသည်။ တစ်ယောက်ယောက်ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလယ်ခေတ်ကာလ၌တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
လုံးဝသဘောတူသည် Eink ကဒီအလုပ်ကိုလုပ်သင့်တယ်၊ အဖြူရောင်နောက်ခံ (ယခုဘက်ပေါင်းစုံအလင်းဖြင့်ဝှက်ထားသော) နှင့်အနက်ရောင်အက္ခရာများ။ လာမယ့်လမှာသူတို့ဟာနည်းပညာအသစ်တွေကိုတင်ဆက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အနိုင်ရသူဟာခရီးလည်းမဟုတ်သလိုအိုအေစစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက paperwhite ပါ။
ငါဖုံးအုပ်ကိုလည်းမလိုချင်ဘူး သူတို့ကခြောက်သွေ့တဲ့ရောင်း၊ ငါတို့ပြောတာ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ paperwhite မှတိုးတက်မှုများကိုမတွေ့ရပါ။
Enric Renart ဟုသူကပြောသည်
သူတို့ထဲကတစ်ခုမျှ "အကောင်းဆုံးကိုဖတ်ရှုသူများ။ " ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံး Kindle, ထိပ်တန်းအကွာအဝေးရှိပေမယ့် Amazon အတွက်သီးသန့်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သိပါတယ်၊ ကျွန်တော်ချိန်ညှိပြီးပြောင်းလုပ်ပါတယ် ... ဒါပေမယ့် ... Drm ကော။ သီအိုရီအရတရားမဝင်သောအရာတစ်ခုခုကိုပုံမှန်အားဖြင့်“ ပုံမှန်အားဖြင့်” ကျွန်ုပ်လက်မခံနိုင်ပါ။ Drm ကိုကျော်သွားခြင်းသည် ဦး စားပေးအဖြစ်မဖြစ်သင့်ပါ။ ငါတတ်နိုင်တိုင်းဒရမ်မပါဘဲဝယ်မယ်၊ Kindle ကိုလိုချင်ရင်အလင်းမရှိဘဲစက္ကူဖြူဒါမှမဟုတ်အခြေခံအကျဆုံးကိုတောင်ငါသွားမှာပါ၊ ဒီကစားစရာနှစ်ခုကသူတို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်အလွန်မတန်တဆစျေးကြီးပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အများကြီးပိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းများမှာ) အခြေခံသို့မဟုတ် Bq Cervantes နှင့်အတူ Wonder ၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Enric Renart အားပြန်ကြားပါ
ဂျယ်ရီ Siegel ဟုသူကပြောသည်
2017 ခုနှစ်တွင် '' ဟောင်း '' Voyage ဝယ်ယူ?
ငါ Kindle အသစ်တစ်ခုဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ Voyage ကသူ့ရဲ့အနိမ့်ဆန်တဲ့အသွင်အပြင်နဲ့ Oasis အတွက်ရိုးရိုးသားသားပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုသဘောကျသွားတယ်။
ငါ MINIMALIST ရှုထောင့်ကပြောသည်နှင့်ငါ Voyage e-reader ကိုအတွက်ရိုးရှင်းစွာအမြင်ရှုထောင့်တစ် ဦး ဒီဇိုင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောအချက်အနေဖြင့်, Oasis ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။
အခုတော့ဒါမဟုတ်ပါဘူး။ နည်းပညာရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်းသည်အားလုံးထက်သာလွန်သည်။ ဖုန်ခလုတ်များသည်ခေတ်မမီတော့ပါ ဒါဟာအတိတ်ဖြစ်ပါတယ် အကယ်၍ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်အကြောင်းရှိပါက၎င်းသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ သင်ရုံဖိအားကိုဖြတ်ပြီးလက်ချောင်းကိုကိုင်ပြီးစာရွက်ကိုဖွင့်ရန်နှိပ်ပါ။ Apple Watch ကဲ့သို့ထိတွေ့နိုင်သောတုံ့ပြန်မှုဖြင့်။
ဒါဟာယောနသန် Ive ပြုလိမ့်မည်ဟုဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ မမြင်နိုင်သောခလုတ်များ
အိုကေ, အလေးချိန်အားဖြင့်။ အဖုံးများနှင့်အတူကဒီထက်လေးလံသည်။ ရှားရှားပါးပါးဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအော်ရီဂရီမူကားအလုပ်လုပ်ပြီးဂျပန်တစ်ခုလုံးကိုထိတွေ့စေသည်။
သီအိုရီအရအိုအေစစ်၏အကောင်းဆုံးသော ergonomics သည်သင်၏လက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Oasis သည်အသေးငယ်လွန်းနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုဖြေရှင်းပြီးသောဖြေရှင်းချက်ဖြင့်ဖြေရှင်းသော်လည်း၎င်းသည်သင့်အားလက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့်သာဖတ်ရန်တွန်းအားပေးသည်။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို၎င်းသည် rectangular Voyage နှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်သည်။
အဆင်ပြေစွာလည်ပတ်ရန် Voyage သည်ဘုတ်အဖွဲ့တစ်လျှောက်အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပြီး Oasis သည်အိပ်ရာဝင်ချိန်တွင်စာဖတ်ခြင်းထက်သာလွန်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောလိမ့်မည်။
အိပ်ယာထဲတွင်ဖတ်ရန် (နောက်တာပါ) အဖြေတစ်ခု၊ SUV Voyage နှင့် Oasis ကိုဝယ်ပါ။
အကောင်းဆုံး Kindle လား
အကောင်းဆုံး Kindle သည်၎င်း၏မမြင်ရသောခလုတ်များပါသည့် Voyage နှင့် Oasis ၏အရွယ်အစားနှင့်အချိုးအစားဖြစ်သည်။
Cornering ဆားကစ်များကသင့်အား Voyage အထက်တွင်မထားပါ၊ ၎င်းသည်အနာဂတ်ဗေဒနှင့်အတိတ်ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်အချက်တစ်ခု ... အလိုအလျောက်အလင်းသည်အနာဂတ်တွင်မည်သည့်ကိရိယာတွင်မဆိုရှိနေသင့်သောနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။
Voyage ၏ ၆ နှင့် LED ၁၀ ခုသည်ခြားနားချက်မရှိ၊ အလင်းနှင့်ပတ်သက်သောတိုင်ကြားချက်များလုံးဝမရှိဘဲအဖြူရောင်စက္ကူလည်းဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်း၊ Origami ဖြင့်ခရီးသွားရန်သည်တစ်တန်တည်းသာလျှင်€ 50 - စျေးနှုန်းချိုသာသည်။ ဒီတော့ဒါကပြanနာမဟုတ်ပါဘူး။
Voyage နည်းပညာဖြင့် Oasis တစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Jerry Siegel အားပြန်ပြောပါ
၎င်းသည်သင်၏လက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Oasis သည်သေးငယ်လွန်းလွန်းနိုင်သည်၊ သို့သော် Reversible solution ဖြင့်ဖြေရှင်းပြီးသော်လည်း၎င်းသည်သင့်အားအမြဲတမ်းလက်ဖြင့်ဖတ်ရန်တွန်းအားပေးသည်။
အိပ်ယာထဲတွင်ဖတ်ရန်အဖြေတစ်ခုရှိပါသည်။ Voyage SUV နှင့် Oasis ကိုဝယ်ပါ။
ငါအကြီးမြတ်ဆုံးစက္ကူစာဖတ်သူထံမှမွေးနေ့များအတွက်တ ဦး တည်းကိုဝယ်ရန်ရှိသည်, သင်အဘယ်သို့အကြံပြုမလဲ ကျွန်တော်အရမ်းကြည့်ကောင်းနေပါတယ်
ပလပ်အင်အသစ်သည်စာသားကို Caliber သို့ထပ်ထည့်သည်